Liqhubekile iBhange loMbuso nokuphungulela abathengi umthwalo njengoba lingayiguqulanga imalimboleko | Umbele
Liqhubekile iBhange loMbuso nokuphungulela abathengi umthwalo njengoba lingayiguqulanga imalimboleko
IBHANGE loMbuso linqume ukungayishintshi imalimboleko njengoba lithe izoqhubeka ibe ku-3.5%. Leli bhange lithe iseyinde indlela esazohanjwa ukuzama ukuvuselela umnotho okhahlanyezwe wukubheduka kweCOVID-19.
Kanti lithe novalo lokuthi ukuhlasela ngamandla kobhubhane seluqala phansi kwamanye amazwe, kungase kuselule isikhathi ebesilokhu silinganiswa sokuthi umnotho womhlaba uphinde usimame.
UMphathi waleli bhange uMnu uLesetja Kganyago uxwayise ngokuthi ngeke bona bebodwa bakwazi ukuphucula isimo somnotho. Uthe loku kudinga ukuhambisana nokuheha abatshalimali, ukukhulisa umnotho nokwakha amathuba omsebenzi.
UKganyago uthe balindele ukuthi isimo somnotho siqhubeke sibe manzonzo.
Usomnotho omkhulu waseFNB uNkk uMamello Matikinca-Ngwenya uthe asibamangazanga isinqumo seBhange loMbuso sokugayiguquli imalimboleko, nathe selenze umsebenzi omkhulu wokuphungulela abathengi umthwalo ngokwehlisa le mali kusukela kuqale iCOVID-19.
UNkk uMatikinca-Ngwenya uthe balindele ukuthi amandla emali aqhubeke nokuma ndawonye kodwa wathi bakhathazekile ngokubhekekile uma kuqagulwa ukuthi umnotho ungase ukhule kangakanani.
IBhange loMbuso lithe lilindele ukuthi umnotho ukhule ngo-3.5% ngo-2021 bese kuthi ngo-2022 ukhule ngo-2.4%. – Intatheli yoMbele
Ukungagculiseki ngomsebenzi enzelwa wona ekade ehambise imoto yakhe kwamnika umqondo webhizinisi eselikhula ngamandla. Uxoxe noZIMBILI VILAKAZI ngomahambanendlwana